Ahoana ny fivoaran'ny fitokisana sy fitondran-tena amin'ny fividianana an-tserasera | Martech Zone
Alakamisy, Aogositra 28, 2014 Alarobia, Aprily 13, 2016 Douglas Karr
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay dia niova be tamin'ny Internet ny fomba fividianana amin'ny Internet. Manana tranokala natokisana mitohy ho olana lehibe tafiditra amin'ny raharaham-barotra rehetra ary noho izany dia nirona nividy avy amin'ny tranokala azony itokisana ny mpanjifa. Izany fahatokisana izany dia naseho tamin'ny alàlan'ny fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo, ny hevitra an-tserasera, na koa ny fisian'ny fivarotana antsinjarany. Raha mbola mihetsika hatrany amin'ny Internet ny varotra. 40% n'ny mpampiasa Internet manerantany - mpampiasa iray tapitrisa mahery - dia nividy an-tserasera. Ny lakilem-pitokisana iray dia ny vavahady fandoavam-bola.
Varavarana fandoavam-bola azo antoka toa PayPal, izay misy mpanjifa mahazo vola amin'ny fifanakalozana sandoka, dia afaka mampitombo ny fiovam-po amin'ny tranokala ecommerce anao. Koa satria iraisam-pirenena ny PayPal, dia manitatra ny fahatokisan'ny mpanjifa ihany koa ny manao orinasa iraisam-pirenena.
Tamin'ny fanadihadiana vao haingana, Forrester Research Inc. nanontany ireo mpivarotra an-tserasera UK momba ny zavatra niainany. Ny valiny dia mampiseho fa ny fanolorana PayPal ho toy ny safidin'ny checkout dia mampiorina ny fifampatokisana ary hita fa haingana sy mora. Manamora ny varotra mihitsy aza!
izany infographic avy amin'ny PayPal manome fanazavana momba ny fanitarana ny toerana iantsenan'ny mpanjifa, ny tranonkala iantsenany, ary ny anton-javatra misy fiatraikany amin'ny taham-panovana an-tserasera toa ny hafainganana, ny fahafaha-manao ary ny fomba fandoavam-bola azo itokisana.
Tags: Fanadihadiana momba ny ecommerce 2013ecommerceinfographic ecommercefitokisana amin'ny ecommercefikarohana forresterfivarotana an-tseraserainfographic fandoavam-bolafanodinana volateknolojia fandoavam-bolapaypalstatistafahatokianauk